Apple's ads zvakadzama, nei achibudirira kudaro? | IPhone nhau
Ngirozi Gonzalez | | Apple zvigadzirwa
Mhando dzese hombe dzinoshandisa iyo media kusimudzira zvigadzirwa zvako uye kusvika kune yakanyanya huwandu hwevanhu. Asi kwete izvo chete, makambani aya anonatsa zvese zvese kuitira kuti mhedzisiro ishambadziro inokwanisa kunyengetedza anenge agamuchira kuitira kuti vakwezve kutarisisa kwavo uye kuti, pakupedzisira, vane chinangwa chekuwana chigadzirwa chako. Zviziviso zveApple zvaisazove zvishoma.
Apple ndeimwe yeakanakisa mukugadzira aya marudzi ezviziviso. Yekupedzisira yakaburitswa neapuro hombe yaive «Husiku humwe«, Yakabatanidzwa mune akateedzana Pfura pa iPhone 7Kunyangwe ivo vasingakurudzire iyo iPhone 7 sekudaro, inotipa ruzivo nezve izvo zvinogona kuitwa nemuchina. Nei kushambadzira kweApple kuchinyengedza isu kuti titenge zvigadzirwa zvavo?
1 Zvitatu zveApple zvakanakisa kushambadza
2 Icho chikonzero chekushanda kweshambadziro
Zvitatu zveApple zvakanakisa kushambadza
Iyo Big Apple inosimudzira zvigadzirwa zvayo kuburikidza makuru terevhizheni network boka reMedaset kana A3Media, pakati pevamwe. Asi pamusoro pezvo, ndiwo makambani enhare pachawo anoshambadza zvishandiso, kunyanya maPhones, pane dzimwe nguva dzakadzidzwa uko kune huwandu hwepamusoro hwevateereri hwavanoda kusvika.
Kana tikataura nezvazvo apple ads Hatigone kukanganwa izvo kwandiri ndezvimwe zveakanakisa:
Mushandirapamwe Chii Chichava Vhesi Yako? yaive imwe yeakarebesa munhoroondo yaApple. Iyo iPad Air kuongorora kwaunogona kushandisa yako tekinoroji nyowani. Uye pazviitiko zvakawanda, nzanga yainzwa ichizivikanwa nemifananidzo: kubva kuzvinhu zvezuva nezuva sekuzivisa mhuka kuburikidza nekushandisa kune zviitwa zvehunyanzvi sekunyora script yemufirimu kana kuongorora mamepu emamiriro ekunze mukutsvaga kusagadzikana.
Kwete zvinhu zvehunyanzvi chete zvinoenderana neApple ads. Pakaburitswa iyo iPhone 6s, Anyanisi Icho chaive chimwe chezviziviso zvakawana kukosha kukuru, kunyanya zvichipa kukosha kune yemhando yepamusoro kusvetuka kwainge kwave kuitwa nekamera nyowani zvine chekuita neyakatangira, iyo iPhone 6.
Yeiyo Big Apple, Kisimusi inguva iyo iwe yaunogona kusimudzira zvigadzirwa zvako kuburikidza nemanzwiro, iwo mamwe manzwiro anobata uye anoita kuti vateereri vanzwire tsitsi nevatambi. Uye ndinofanira kutaura kuti vanoshanda nemazvo.
Icho chikonzero chekushanda kweshambadziro
Robert Cialdini chiremba wezvepfungwa uyo pakati pezana ramakumi maviri ramakore theoretically akaronga maitiro ehukasha, ndiko kuti kunyengetedza. Sezvandambotaura kare, makambani ese anoshandisa nzira dzekunyengetedza kukwezva vateereri. Panyaya yekambani yaTim Cook, zvinogona kunzi vanoshandisa akati wandei enheyo dzakataurwa naCialdini, asi izvo zviviri zvakakosha ndizvo zvinotevera:
Tsitsi: ndiko kuti, kuzivikanwa nezvatinoona. Kana tikanzwa takabatana nechimwe chinhu chatiri kuona mushambadziro, isu tinenge tichitenga, kunyangwe tisingazvizive.
Chiremera: mazhinji eshambadziro anotungamirwa nemainjiniya akagadzira zvigadzirwa. Kutaura neaya mazwi ehunyanzvi achiperekedzwa nemifananidzo iyo, dzimwe nguva, isu tisinganzwisise inoita kuti tione kuti izvo zvavari kutiudza ichokwadi, zvakanaka.
Hatigone kuramba kuti patinonzwa chiziviso kubva kuApple, kunyangwe iri mimhanzi yepashure chete, isu tatoziva kuti ndeyavo. Asi hausi mimhanzi chete inoita kuti nyika ibude mushambadziro. Izvi ndizvo zvinhu zvitatu izvo zvinoita kuti Apple shambadza zvavari:
Mumhanzi: Shambadziro yega yega ine rwiyo rwusingatsanangurike. Dzimwe nguva chimbo chinozivikanwa, chinobata, chinyorwa, chisingazivikanwe rwiyo ... asi tinogara tichiguma tichichiziva sekufamba kwenguva.
Kushushikana: Ndiani asati ambofadzwa neakakura maapuro ekisimusi zviziviso? Kunzwira tsitsi nebumbiro racho kunogara kuchishandiswa kuisa mukati medu zvaunoda kutiratidza.
Vanozivikanwa mavara: Pharrell Williams, Nicky Minaj, Samuel L. Jackson ... vaimbi, vatambi uye vanhu vane mukurumbira venyika yeAmerica vanoonekwa nguva dzose mumashambadziro eApple uye tingave tichida kana kwete, vanotifurira kana zvasvika pakuona zvigadzirwa zvakashambadzirwa.
Yenguva inotevera iyo Apple painotanga chiziviso chitsva, uchanyatso rangarira ruzivo rwese urwu, ucharamba uchinyengetedzwa nemidziyo yeBig Apple?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Nei maApple Ads Achibudirira Zvakadai?
Iyo iPhone 8 "premium" inogona kuita anodarika chiuru euros